Marko 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Marko Asɛmpa 9:1-50
Ɔsaa abarimaa bi a honhommɔne wɔ no so yare (14-29)
Obi a ɔwɔ gyidi no, ade nyinaa betumi ayɛ yiye ama no (23)
Yesu kaa ne wu ho asɛm bio (30-32)
Asuafo no gyee akyinnye sɛ hena na ɔyɛ wɔn mu kɛse (33-37)
Nea ɔnsɔre ntia yɛn no wɔ yɛn afã (38-41)
“Munnya nkyene wɔ mo mu” (49, 50)
9 Afei nso, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, wɔn a wogyina ha yi mu bi wɔ hɔ a, wɔrenka owu nhwɛ kosi sɛ wobehu sɛ Onyankopɔn Ahenni redi tumi.”+ 2 Nnansia akyi no, Yesu faa Petro ne Yakobo ne Yohane kaa ne ho, na ɔde wɔn kɔɔ bepɔw tenten bi so. Wɔn nko ara na na wɔwɔ hɔ. Na ɔsakrae wɔ wɔn anim;+ 3 na n’ataade fii ase yɛɛ hyɛnhyɛn, na ɛyɛɛ fitafita. Obiara nni asaase so a obetumi ahoro ntama ama ayɛ fitaa saa. 4 Afei nso, Elia ne Mose yii wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn, na na wɔne Yesu rekasa. 5 Ɛnna Petro ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Rabi, eye sɛ yɛwɔ ha. Enti ma yensi ntamadan abiɛsa, wo de baako, Mose de baako, Elia nso de baako.” 6 Nokwarem no, na Petro nhu nea ɔnyɛ, efisɛ na wɔabɔ hu paa. 7 Na omununkum bi bae bɛkataa wɔn so, na nne bi+ fi omununkum no mu bae sɛ: “Oyi ne me Ba, nea medɔ no+ no. Muntie no.”+ 8 Na amonom hɔ ara, wɔtotoo wɔn ani, na wohui sɛ obiara nni wɔn nkyɛn bio, gye Yesu. 9 Bere a wɔresian afi bepɔw no so no, ɔka kyerɛɛ wɔn denneennen sɛ wɔnnka nea wɔahu no nnkyerɛ obiara+ kosi sɛ onipa Ba no benyan afi awufo mu.+ 10 Enti wɔanka asɛm no ankyerɛ obiara,* nanso nyan a obenyan afi awufo mu no de, wɔn ara dii ho nkɔmmɔ. 11 Na wofii ase bisabisaa no nsɛm sɛ: “Adɛn nti na akyerɛwfo no ka sɛ, ɛsɛ sɛ Elia+ di kan ba ansa?”+ 12 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ampa, Elia bedi kan aba abɛtoto nneɛma nyinaa yiye.+ Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na wɔakyerɛw onipa Ba no ho asɛm sɛ, ɛsɛ sɛ ohu amane pii+ na wobu no animtiaa?+ 13 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, Elia+ aba, na wɔyɛɛ no nea wɔpɛ biara, sɛnea wɔakyerɛw ne ho asɛm no pɛpɛɛpɛ.”+ 14 Bere a wɔbaa asuafo a aka no nkyɛn no, wohuu nnipadɔm kɛse bi wɔ wɔn ho, na na akyerɛwfo bi ne wɔn regye akyinnye.+ 15 Na nnipadɔm no nyinaa ani bɔɔ no so ara pɛ, wɔn ho dwiriw wɔn, na wotutuu mmirika kɔɔ ne nkyɛn kokyiaa no. 16 Na obisaa wɔn sɛ: “Dɛn na mo ne wɔn regye ho akyinnye?” 17 Na obi fi nnipadɔm no mu buaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, mede me babarima brɛɛ wo, efisɛ mum honhom wɔ no so.+ 18 Baabiara a ɛbɛba no so no, etwa no hwe fam, n’ano po ahuru, ɔka ne se si so denneennen, na ɔyɛ mmerɛw. Meka kyerɛɛ w’asuafo no sɛ wontu honhom no, nanso wɔantumi.” 19 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “O awo ntoatoaso a munni gyidi,+ bere tenten ahe na me ne mo ntena? Minnya mo ho abotare nkosi da bɛn? Fa no brɛ me.”+ 20 Enti wɔde abarimaa no brɛɛ Yesu. Bere a honhom no huu Yesu no, ɛmaa abofra no wosowosowee prɛko pɛ, na ɔhwee fam bu faa so, na n’ano poo ahuru. 21 Ɛnna Yesu bisaa papa no sɛ: “Bere bɛn na efii ase yɛɛ no?” Ɔkae sɛ: “Efi ne mmofraase pɛɛ. 22 Ɛtaa ma otwa hwe ogya ne nsu mu sɛnea ɛbɛyɛ a ebekum no. Sɛ wubetumi ayɛ ho biribi a, hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn.” 23 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Wuse, ‘Sɛ wubetumi a’! Hwɛ, obi a ɔwɔ gyidi no, ade nyinaa betumi ayɛ yiye ama no.”+ 24 Ɛhɔ ara na abofra no papa teɛɛm kae sɛ: “Mewɔ gyidi! Boa me ma me gyidi nyɛ kɛse!”*+ 25 Bere a Yesu hui sɛ nnipadɔm bi de mmirika* reba wɔn nkyɛn no, ɔkaa honhom fĩ no anim sɛ: “Mum ne asotiw honhom, mehyɛ wo sɛ fi ne mu, na mma ne mu bio!”+ 26 Na honhom no teɛɛm, na ɛmaa abarimaa no wosowee mpɛn pii; afei efii ne mu. Na abofra no yɛɛ te sɛ nea wawu, enti na wɔn mu dodow no ara reka sɛ: “Wawu!” 27 Nanso Yesu soo ne nsa maa no so, na ɔsɔree. 28 Ɛnna Yesu wuraa ofi bi mu, na n’asuafo no bisaa no kokoam sɛ: “Adɛn nti na yɛantumi antu honhommɔne no?”+ 29 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Saa honhommɔne yi de, mpaebɔ nko ara na wobetumi de atu no.” 30 Wofii hɔ kɔe, na wɔkɔfaa Galilea, nanso na ɔmpɛ sɛ obiara bɛte. 31 Efisɛ na ɔrekyerɛkyerɛ n’asuafo no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wobeyi onipa Ba no ahyɛ nnipa nsa, na wobekum no.+ Ɛwom sɛ wobekum no de, nanso nnansa akyi, obenyan.”+ 32 Ná wɔnte n’asɛm no ase, nanso na wosuro sɛ wobebisa no. 33 Na wɔkɔɔ Kapernaum. Bere a ɔwɔ ofi no mu no, obisaa wɔn sɛ: “Dɛn na na moregye ho akyinnye wɔ kwan so no?”+ 34 Wɔyɛɛ dinn, efisɛ bere a wɔnam kwan so no, na wɔregye akyinnye sɛ hena na ɔyɛ wɔn mu kɛse. 35 Enti ɔtenaa ase, na ɔfrɛɛ Dumien no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ obi pɛ sɛ odi kan a, ɛsɛ sɛ odi akyi koraa na ɔsom mo nyinaa.”+ 36 Na ɔfaa abofra kumaa bi, na ɔde no gyinaa wɔn mfinimfini. Ɛnna ɔde ne nsa too ne kɔn mu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: 37 “Obiara a obegye mmofra nkumaa+ yi mu baako me din mu no, na wagye me nso; na obiara a obegye me no, ɛnyɛ me nko na ogye me, na mmom Nea ɔsomaa me no nso.”+ 38 Yohane ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, yehuu obi a ɔde wo din retu ahonhommɔne, na yɛyɛe sɛ yebesiw no kwan, efisɛ na onni yɛn akyi.”+ 39 Ɛnna Yesu kae sɛ: “Monnyɛ sɛ mubesiw no kwan, na obiara nni hɔ a ɔde me din bɛyɛ anwonwade, a ɛhɔ ara obetumi asan aka me ho asɛmmɔne. 40 Efisɛ obiara a ɔnsɔre ntia yɛn no, na ɔwɔ yɛn afã.+ 41 Na obiara a ɔbɛma mo nsu kuruwa baako anom esiane sɛ moyɛ Kristo dea+ nti no, nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, n’akatua remmɔ no da.+ 42 Nanso obiara a ɔbɛto nkumaa a wɔwɔ gyidi yi mu baako hintidua no, anka eye ma no mmom sɛ wɔde ɔbo kɛse* a afurum twe bɛsɛn ne kɔn mu, na wɔde no akɔto ɛpo mu.+ 43 “Na sɛ wo nsa to wo hintidua a, twa fi hɔ. Eye ma wo sɛ wubedi dɛm de akɔ nkwa mu sen sɛ wowɔ nsa abien na wobɛkɔ Gehenna,* ogya a wontumi nnum no mu.+ 44 *—— 45 Na sɛ wo nan to wo hintidua a, twa fi hɔ. Eye ma wo sɛ wobɛyɛ apakye de akɔ nkwa mu sen sɛ wowɔ nan abien na wɔbɛtow wo ato Gehenna.*+ 46 *—— 47 Na sɛ w’aniwa to wo hintidua a, tow kyene.+ Eye sɛ wode aniwa baako bɛkɔ Onyankopɔn Ahenni mu sen sɛ wowɔ aniwa abien na wɔbɛtow wo ato Gehenna,*+ 48 faako a mmoawa nwu, na ogya no nnum no.+ 49 “Ɛsɛ sɛ wɔde ogya hyɛ obiara nkyene.+ 50 Nkyene ye; na sɛ nkyene dɛ fi mu a, dɛn na mode bɛhyɛ no nkyene?+ Munnya nkyene wɔ mo mu,+ na mo ne mo ho ntena asomdwoe mu.”+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔde asɛm no too wɔn koma so.”
^ Anaa “Faako a mihia gyidi no, boa me!”
^ Anaa “nnipadɔm bi agye bum.”
^ Anaa “owiyammo.” Ná wɔyam hwiit wɔ ɔbo a ɛte saa so.